Fitiavana sy fanambadiana - ny kinova momba ny masoivoho Martech Zone
Fitiavana sy fanambadiana - The Agency Version
Talata, Aprily 8, 2014 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ny fahafahantsika misafidy, Highbridge, efa 5 taona mahery izao ary nanambara ny fiovan'ny làlambe. Tamin'ny taon-dasa, tena nanamboatra ny mpiasa izahay ary avy eo naka mpanjifa sarotra maro izay saika nitarika ny fahafatesanay.
Nanangana fifandraisana tsy mampino amin'ireo mpanjifa mahatalanjona izahay - ny ankamaroany dia niaraka taminay nandritra ny taona maro. Tianay izy ireo ary manantena fa tia antsika izy ireo - tsy karama fotsiny izany fa ny fitiavantsika. Tsy misy mahasambatra antsika kokoa noho ny mahita ny fahombiazan'ny mpanjifanay, ary tsy misy mahasosotra kokoa noho ny rehefa tsy mandeha tsara ilay fifandraisana.
Mandany fotoana bebe kokoa aho izao hiasa miaraka amin'ireo vinavina hahazoana antoka fa samy manolo-tena amin'ny zava-dehibe isika fanambadiana ary samy mitady fifandraisana feno fitiavana. Te hisoroka ny fidirana amin'ny fifandraisana mikorontana aho amin'ny vidiny rehetra - na manao ahoana na manao ahoana ny haben'ny fifamofoana. Ny fifandraisana ratsy dia tsy manimba ny mpanjifa voakasik'izany - mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny mpanjifanao rehetra izany satria lany ny andronao sy ny herinao manandrana mamonjy ilay fifamofoana. Raha afaka mamantatra toetra mampiavaka ny mpanjifa mampihetsi-po amin'ny fizotry ny varotra isika, dia afaka mamonjy antsika rehetra amin'ny aretim-po io.
Te hanana fahafinaretana kely izahay ary manome jiro kely amin'izao fotoan-tsarotra izao… noho izany ity sary ity dia mitanisa ohatra amin'ny karazana fifandraisana izay indrisy fa tsy maintsy nihatahana! fampidirana Fitiavana sy fanambadiana - The Agency Version.
Tags: fahafahana misafidympanjifafitiavana sy fanambadianafanambadianafifandraisana
The A to Z Guide amin'ny marika manokana
Apr 8, 2014 amin'ny 11: 33 AM
Oh yeah! Efa niandry an'io aho! Faly mahita azy nivoaka farany ho hitan'ny besinimaro! Brilliant!
Apr 8, 2014 ao amin'ny 10: PM PM
Heveriko fa efa niaraka tamin'ireto mpivady vitsivitsy ireto aho, misy vondrona fitsaboana ve eo akaiky eo?
Nihevitra aho fa izany no nataonay isan-kerinandro!
Apr 11, 2014 ao amin'ny 12: PM PM
tena mampalahelo koa! Vita tsara, mila manangana quiz izay azon'ny mpanjifa mety horaisina ianao izao mba hanivanana azy ireo!
Apr 20, 2014 ao amin'ny 12: PM PM
FITIAVANA sy FANAMBADIANA (The Agency Version) – Tsara! 🙂